रगत एउटै छ, आँशु उस्तै छ, तर ‘दलित’ कसरि फरक? – www.agnijwala.com
रगत एउटै छ, आँशु उस्तै छ, तर ‘दलित’ कसरि फरक?
तर मलाई यो पटकै मन पर्दैनथ्यो । म साथीसँगै एउटै थालमा खाजा खान्थे । साथीकि ममिले मैले खाजा खाएको कसैले देखेको छ कि भनेर दायाँ- बायाँ हेर्नुहुन्थ्यो । म उहाँको मुखमा टुलुटुलु हेर्थें । मलाई कति नरमाइलो लाग्थ्यो । म सधै खाजा खान मेरी बिक साथीको घर जान्थें । हामीले बयर चोरेर खान्थ्यौं ।
कसले कस्ले बनायो मान्छेलाई दलित ? को हो दलित ? किन हेपिन्छ दलित ? सानो जाती, दलित जातीको अस्तित्व ,पहिचान त प्राचीन शास्त्रीहरुले राखेर गए ।यसमा कसको के दोष छ र ? कामको आधारमा मान्छेको पहिचान सानो जातीले गर्नुपर्ने भनेर बाड्फाड गरिदिए । के यसमा न्याय भयो र ?
मरि लानु केही छैन । मान्छे जातमा सानो ठुलो कोहि हुन्न । विचारमा सानो ठुलो हुने हो । यो दुनियाँ आज होकि भोलि टुंगो हुदैन । काटे एउटै रगत आउँछ । मरेर सबै खरानी हुने हो । यो समाजमा जनचेतना जगाउनु अति आवश्यक छ । सबैको सोचमा परिवर्तन लयाउनु आवश्यक छ ।
толкпродвижение группы вконтакте в яндексеобратныеконсульство франции в москве визалечение рака простаты в израилеобзор хронографов для стрельбы